Ogo, Advanced Right n'akuku -egwe ọka isi Manufacturers, Mere na China - Dongguan Tuoyuan nkenke Machinery Co. LTD.
.Lọ > Ngwaahịa > Ngwaọrụ ngwaọrụ > Side-egwe ọka isi > Ihu igwe nri
Aka nri nri igwe oke ndepụta
1). 0-500kg: ikuku ibu mkpa
2). > 500kg: ihe mbu mbu mbu
3). Dị ka onye ahịa chọrọ
2). Polybag / anụ ahụ Wrapping Akwụkwọ / Afọ akpa / EPE ụfụfụ / + Carton / Osisi mbukota
3). Dị ka ihe onye ahịa chọrọ dị mma
Etiti oge:10 ~ 15 ụbọchị, dị ka kwa ahịa ukwu na chọrọ
A5: Ee, anyi nwere, mana obughi otutu ihe.
A7: Ndo, o siri ike iwere ngwongwo were ego. A na m atụ ụjọ na anyị agaghị anabata ịkwụ ụgwọ L / C n’ụdị oge pụrụiche.
Q9: Kedu maka oke nkụ osisi na ịdị arọ nke ngwugwu?
A9: Total abụọ osisi igbe: otu maka nkpuchi slicing akpụ igwe na 2100 * 860 * 1760mm (L * W * H) na obe ibu gburugburu 700 KG; nke ọzọ maka earloop ịgbado ọkụ igwe na 1450 * 1000 * 1650mm (L * W * H) na obe ibu aroud 400 KG; ngụkọta otu akpaka ụgbọelu nkpuchi igwe akara bụ 1100KG ngwugwu na 2 osisi igbe.
Tags na-ekpo ọkụ: Ihu igwe nri, aka, ogo, ndị nrụpụta, emere na China, CE